मुटुका लागि मदिरा राम्रो कि नराम्रो ? | News Dabali
October 8, 2016 | 1:11 pm
डाक्टरसाब्, म त रक्सी खान्न, कहिलेकांही वियर मात्रै हो ।
डाक्टरसाब्, दिनहुं अलिअलि रक्सी त मुटुलाई राम्रो भन्छन् नि होइन ?
डाक्टरसाब्, म त पिउने भनेको विदेशी मात्रै हो, नेपाली, लोकल भनेको त छुदा पनि छुन्न ।
मदिरा भन्नाले अल्कोहोलयुक्त पेय पदार्थलाई भनिन्छ । सबैलाई थाहा छ, मदिरा सेवन गर्नुहुँदैन ।
सबैलाई थाहा छ, मदिराले स्वास्थ्यलाई नराम्रो गर्छ ।
तर पनि मानिसको स्वभाव – हानि नै गर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि सेवन गर्नैपर्छ ।
कहिले थकाइ लागेर, कहिले टेन्सन भएर, कहिले प्रगति भएर, कहिले अरुको मन राख्न, कहिले चाडवाड परेर ।
चाडवाड, भोजभतेरमा त रक्सीको उपस्थिति नै आफ्नो स्ट्याटस् को पहिचान बन्छ । कसले कति महंगो रक्सीले पाहुनाको सत्कार गर्नसक्यो, त्यति नै हाइ प्रोफाइल ।
मदिरा पिउने बानी पनि फरक–फरक हुन्छ । केही काम नगर्नेहरु विहानैदेखि शुरु गर्छन् । कोहीकोहीलाई साँझ परेपछि अलिकति पिउनैपर्ने हुन्छ ।
कोही गुड फ्राइडे मात्र पिउछन् भने कोही साथीभाई भेटेपछि पिउनैपर्ने खालका हुन्छन् ।
कोही नियमित निर्धारित परिमाण पिउने स्वभावका हुन्छन् भने कोही पिएपछि मात्तिनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
मदिरा पिउने बानी भएका मानिसहरु अधिकांश मांशहारी नै हुन्छन् । भुटेको, तारेको, साँधेको मासुका परिकारहरु मदिरासंग मिठो पनि मानिन्छन् ।
हाम्रो समाजमा रक्सीको कुरामा डाक्टरहरुको दुइथरी भनाई अगाडि आउछन् । एकथरी खादै नखाने सल्लाह दिन्छन् भने अर्काथरी केही मात्रामा दिनहु खाने गरेमा शरीरलाई फाइदा नै गर्छ भन्ने गर्छन् ।
विरामी पनि त्यस्तै हुन्छन् । अलिअलि खाने बानीले राम्रै गर्छ भन्ने सल्लाहकै पछि लाग्छन् तर त्यो अलिअलि कति हो ? धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
मैले दैनिक चेकजाँच गर्ने सिलसिलामा करीब पाँच प्रतिशत विरामी मात्र आफूलाई नियन्त्रणमा राखेर पिउने बानी भएको भेटेको छु ।
शुरुमा दुइ पेगमात्रै हो भनेर शुरु गर्ने अनि दुइपछि अलिकति अलिकति भन्दै बढाउदै जाने प्रवृत्ति पनि धेरै भेटिने नगरेको होइन ।
त्यसैले कुनै डाक्टरले पिउने सल्लाह दिन्छन् भने कति पिउने हो मात्रा पनि सोध्न र आफूलाई अनुशासनमा पनि राख्न जरुरी छ । आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्न भने त्यस्ता व्यक्तिले पिउने बानी छोडेकै राम्रो ।
रक्सी नखाइ वियर, वाइन खाए हुन्न र ?
व्हिस्कि खानुस्, वाइन खानुस्, वियर खानुस्, भोड्का, लोकल, रम, जीन जे पिएपनि सबैमा अल्कोहोलको मात्रा भइहाल्छ । कुरा प्रतिशतको मात्रै हो र प्रतिशत बोतलमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
कुनैमा बढी त कुनैमा कम मात्रा हुन्छ । व्हिस्किमा अल्कोहोलको मात्रा झण्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ भने वाइनमा १२ त वियरमा ५ देखि ६ प्रतिशत । घरमै बनाइने लोकल रक्सीको बारेमा जानकारी पाइएन ।
हरेक कुराको केही न केही राम्रा–नराम्रा पक्ष भएझैं यस्ता अल्कोहोलयुक्त पेय (हार्ड ड्रिङस्) का पनि केही राम्रा नराम्रा पक्ष छन् ।
अहिलेसम्म भएका अध्ययन अनुसार वाइन पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । तर यसको फाइदा यसमा रहेको अल्कोहोलको कारणले भन्दा पनि यसमा प्रयोग हुने अंगुर तथा अन्य फलफूलको रसले हो । यस्ता फलफूलको रसमा पाइने विभिन्न एण्टिअक्सिडेण्टहरुल शरीरमा फाइदा गरिरहेको हुन्छ । जुन कुरा नियमित फलफूल खानाले पनि प्राप्त हुन्छ । यसको मात्रा भोड्का तथा व्हिस्कि जातिमा कम हुन्छ भने वियरमा वाइन जतिकै हुन्छ ।
अल्कोहोलको मुटुमा राम्रो असर भनेको यसले रगतमा हुने राम्रो कोलेस्टेरोल (एचडिएल)को मात्रा बढाइदिन्छ । तर यस्को मतलब एचडिएल बढाउन रक्सी खानैपर्ने भन्ने होइन ।
दिनहु व्यायाम गरेमा पनि यसको मात्रा बढेर जान्छ । रक्तचापलाई कम गर्ने, तथा रक्तनलीमा रगत जम्न नदिने यसका केही राम्रा पक्ष हुन् । तर सिफारिश गरिएभन्दा बढी रक्सि सेवनले रक्तचाप बढाउने, कलेजो खराब गर्ने, मोटोपना बढाउने, दिमागको पक्षघात गराउने तथा सुगरको समस्या शुरु हुने हुन्छ । मुटुको चालको गडबडी तथा मुटुको मांशपेशीको रोग कार्डियोमायोप्याथी पनि रक्सीको अत्यधिक सेवनले गराउनसक्छ । जसको कारण पनि मानिसको मृत्यु हुनसक्छ ।
कति हो त स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्स ?
नेशनल इन्ष्टिच्यूट अफ अल्कोहोल अब्यूज एण्ड अल्कोहोलिजमका अनुसार कुनै पनि पेय पदार्थ जसमा १४ ग्राम अल्कोहोल रहेको हुन्छ, त्यसलाइ स्टान्डार्ड ड्रिङ्स भनिन्छ ।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन तथा अमेरिकन डाइबिटिज एशोसिएसन दुबैका अनुसार व्हिस्कि, स्पिरिट सेवन गर्ने हो भने ४५ मिलि, वियर हो भने ३४० मिलि तथा वाइन र साइडर हो भने १४० मिलिलाई स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्स भन्ने मान्यता दिइएको छ । ४५ वर्षमाथिका स्वस्थ शरीर भएका महिलाहरुले दैनिक एक तथा पुरुषहरुले दिनको दुइ स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्ससम्म पिउन सकिने तथा मदिराको सेवन गर्नेलाई अनुशासनमा बसेर सेवन गर्ने सल्लाह दिन्छ भने शुरु गरी नसकेकाहरुलाई शुरु नै नगर्ने सल्लाह दिन्छ ।
मदिरा र मुटुरोग
अमेरिकन हार्ट एशोसिएसनको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको अध्ययन अनुसार माथि उल्लेखित स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्स गर्ने मानिसहरु भन्दा अल्कोहोल सेवन नगर्ने मानिसको मृत्यु मुटुरोगको कारण बढी भएको पाइयो । अध्ययनमा के पनि देखाएको थियो भने दिनमा २ भन्दा बढी पटक अल्कोहोल सेवन गर्ने मानिसको मृत्यु नपिउने मानिसहरुभन्दा बढी पाइयो । तर मुटुरोग भएका विरामीहरुले मदिरा सेवन गर्दा मुटुको चाल गडबडी हुने, रक्तचाप अनियन्त्रित हुने, मुटुको काम गर्ने क्षमता कमजोर आदि समस्या हुने गरेकोले मदिराबाट टाढा रहनुनै सल्लाह दिइन्छ ।
मदिरा र डाइबिटिज
सुगरका विरामीले मदिरा सेवन गर्नुपूर्व धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दछ । अमेरिकन डाइबिटिज एशोसियसनले रगतमा सुगर अनियन्त्रित छ भने मदिरा सेवन वर्जित गरेको छ । एक दुइ ड्रिङ्सले सुगरका विरामीको रगतमा सुगरको मात्रा बढाइदिन्छ भने धेरै पिएमा सुगरको मात्रा धेरै नै कम गराइदिनसक्छ ।
मदिरा सेवन गरेपछिको २४ घण्टासम्म पनि यसले रगतमा सुगरको मात्रा कम गराउनसक्छ । रगतमा सुगरको मात्रा चाहिने भन्दा कम भएमा मानिसको मृत्युसमेत हुनपुग्छ ।
त्यसैले गर्ने नै हो भने मदिरा सेवन गर्नुपूर्व सुगरको अवस्था आवश्यक भन्दा कम छ कि हेरेर मात्र सेवन गर्नुपर्छ । साथै बीचबीचमा र २४ घण्टासम्म पटक पटक सुगर जांच गर्न सल्लाह दिन्छ ।
मदिरा सेवन गरेको बखत रगमा सुगरको मात्रा १०० देखि १४० भित्रै राख्नुपर्ने अमेरिकन डाइबिटिज एशोसियसनको सल्लाह छ । त्यसैले सुगरको विरामीले मदिरा सेवन गर्दा कहिलेपनि खालीपेटमा नगर्न र खानासंगै सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ ।
शरीरमा सुगर कम हुंदा देखिने लक्षणहरु जस्तै मुटुको ढुकढुकी बढ्ने, पसीना आउने, चक्कर आउने, बेहोश होला जस्तो हुने तथा हात काम्ने आदि बारे विरामीलाई पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ । साथै कुनै मदिरा सेवन गर्दा विस्तारै सेवन गर्न र डाइट सोडा वा पानीसंग मिसाएर मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
वियर तथा वाइन जस्ता मदिरामा हुने गुलियोपना तथा क्यालोरीले रगतमा सुगरको मात्रा अनियन्त्रित गरिदिन्छ, वजन बढ्न मद्धत गर्छ । मदिराले भोक धेरै जगाउने भएकोले खानामा नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्न जान्छ । फलस्वरुप रगतमा सुगरको मात्रा बढ्न जान्छ ।
मदिराको सेवनले रक्तचाप तथा रगतमा खासगरी खराब कोलेस्टेरोल बढाइदिन्छ । यी सबै नकारात्मक असरहरुले अन्तमा असर पार्ने भनेको मुटुमै हो ।
हाम्रो समाजमा जनचेतनाको कमी छ । स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको पाइंदैन । आफूलाई लागेको रोग, त्यसका लक्षणहरु, आकस्मिक अवस्थामा घरमै गर्नसकिने उपचारहरुबारे जानकारी, खाना सम्बन्धि आवश्यक जानकारी आदिको अभाव हुनाले सुगरका विरामीले पनि मदिरा सेवन नगर्नु नै हितकारी देखिन्छ ।
मासु र मदिरा
दशैंमा मासुसंगै मदिरा अनि चिल्लो, पीरो मसालेदार खानाहरु धेरै खानाले स्वस्थ मानिस पनि अस्वस्थ भई अस्पताल दौडनु परेको हुन्छ । त्यसैले खानेकुराको हकमा अलि बढी नै सचेत हुन जरुरी छ । खानेकुरा मासु खाँदा थोरैथोरै बरु धेरै पटक खानु राम्रो हुन्छ । तर मासुसगै सागपात र फलफूलसहितको सन्तुलित खाना खान जरुरी हुन्छ ।
अत्यधिक चिल्लो, मसालेदार बोसोयुक्त खानाले ग्याष्टिक बढाउने, अपच गराउने हुन्छ । बासी खाना, काँचो मासु खाने गर्नाले फूडप्वाइजन गराउनसक्छ ।
खानामा मसलाको अत्यधिक प्रयोग कम गरिनुपर्छ । रातो मासु अनि मदिराको अत्यधिक सेवनले रगतमा कोलेस्टेरोल तथा यूरिक एसिड बढाउने हुन्छ । जनावरको भन्दा कुखुुरा, हांस तथा माछा खानु राम्रो हुन्छ । सफ्ट ड्रिङ्सलेग्याष्टिक गराउने, मोटोपना बढाउने, तथा रगतमा खराक कोलेस्टेरोलको मात्रा बढाई दिन्छ । यस्ता बढी गुलियोपना भएका पेयपदार्थको सट्टामा सादा पानी पिउनु नै उत्तम हुन्छ ।
स्वस्थ मानिसले मदिरा सेवन गर्ने नै हो भने पनि माथि उल्लेखित मात्राको बिचार गर्नु जरुरी हुन्छ । मुख्य कुरा आफूमाथि नियन्त्रण हुनु जरुरी हुन्छ । विहानैदेखि रातिसम्म मदिरामै मस्त हुने बानीले आफैलाई भित्रभित्रै खराब गरिरहेको हुन्छ भन्ने विर्सनुहुंदैन ।
धूमपान, मदिरापान रहितको स्वस्थ बडादशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
– See more at: http://www.swasthyakhabar.com/news-details/1093/2016-10-05#sthash.y312yts2.dpuf
नेपालमा एकैसाथ तीन मौसमी प्रणालीको प्रभाव, कहाँ हुँदैछ वर्षा र हिमपात ?
काठमाडौँ / नेपालमा पश्चिमी वायुसँगै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव छ । जसकारण…
काठमाडौ : प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्षकृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहान शतबीज छरी मनाइने बालाचतुर्दशी पर्व आज बिहान मनाइँदैछ। त्रयोदशीका बिहीबार बेलुकीदेखि दिवङ्गत…
कास्की /गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेशका पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनेले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन समितिले उमेदवारको चर्को शुल्क…
कास्की /नेपाली काँग्रेसको गण्डकी प्रदेश सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल प्यानलबाट शुक्रराज शर्मालाई उठाइने भएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार…
टिकटकमा यसरी फैलाइयो लकडाउन बारे भ्रामक भिडियो
news_24npllite ले टिकटकमा अप्लोड गरेको भिडियोको स्क्रीनसट केही साता अघि दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पहिचान भएको नयाँ कोरोना भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’…